Baroness Catherine iyo Xasan Sheekh oo ugu Baaqay Caalamka in ay ka Faa’ideystaan Xasiloonida Soomaaliya | IshaBay Dhaba
Baroness Catherine iyo Xasan Sheekh oo ugu Baaqay Caalamka in ay ka Faa’ideystaan Xasiloonida Soomaaliya
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wakiilka arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Baroness Catherine Ashton ayaa ugu baaqay beesha caalamka in laga faa’iideysto xasiloonida dib ugu soo laabtay Soomaaliya, isla markaana taageero la siiyo hay’adaha dowliga ah.
Maqaal ay si wada jir ah u qoreen labada mas’uul ayaa lagu sheegay in xaaladda ammaan ee Soomaaliya iminka ay si wayn wax isaga beddeleen, loona baahan yahay in la abuuro xaalad daganaansho ah oo muujineysa in muranka siyaadeed aan lagu xallin karin rabshado la abuuro, musuq-maasuq iyo iska horkeen qabaa’il.
Madaxweyne Xasan iyo Ashton waxa ay sheegeen in haatan Soomaaliya ay mudnaan wayn u leedahay tayeynta ciidamada ammaanka iyo dhismaha caddaaladda, waxayna sheegeen in Midowga Yurub uu horey u waday barnaamijyo lagu horumarinayo waaxyaha ammaanka iyo caddaaladda.
Maqaalka waxaa lagu xusay in awood millateri iyo dadaalo kale duwan ay horseeday in meesha laga saaro maleeshiyaadka Shabaab iyo falalkii burcad badeednimada.
Madaxwayne Xassan iyo Catherine Ashton waxa ay sheegeen in dhowr bil ka hor dad badan aysan fileyn in Soomaaliya ay si deg deg ah uga bixi doonto dagaalladii sokeeye iyo xaaladdii quusta ahayd ee ka jirtay dalka Soomaaliya.
Xasan Sheekh Maxamuud iyo Catherine Ashton, waxa ay ku nuuxnuuxsadeen in howlaha lagu hormarinayo aammanka, dib u dhiska dhaqaalaha dalka, caddaaladda iyo dhammaan arrimaha muhiimka ah ee aysan dowladda Soomaaliya oo kaliya wax ka qaban karin loo baahan yahay in beesha caalamka ay ku taageerto.